Created 05-03-2013 03: 50: 42
Akachinja 06-03-2013 19: 00: 51
Munyori: David Garwood http://daveg.cbfsim.org/
Complete pasuru chizvarwa FSX-SP2 & P3D yaiva yakakurumbira vashanyire ndege J / 1 Autocrat. Zvinosanganisira muenzaniso vane chitsama uye specular nzvimbo ine, vatatu nderechokwadi repaints, zvizere modeled mvere 3D gauges. A guru chokuvonga kuna Dave Garwood nokuda kwazvo basa.
The Auster J / 1 Autocrat munhu-seater matatu mutakurwi ndege rinobva Taylorcraft Auster Mk.V. ndege iyi akabereka nomukaka zhinji uye anoramba anobudirira zvikuru British zvigadzirwa vehurumende ndege pakarepo pashure peHondo Yenyika II.